Kooxo aan heebtooda lagaraneynin oo awaamiir islaami ah ku soorogay magaalada garowe | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Kooxo aan heebtooda lagaraneynin oo awaamiir islaami ah ku soorogay magaalada garowe
Xalay fiidkii ayaa waraaqo lagu digniin aiyo awaamir ah lagu arkay bartamaha magaalada Garowe ee xarunta maamulka shahaadada ladirika ee puntoland.
Warqadahaan oo aan lagaraneynin cida kadambeysay qoristeeda ayaa waxa lagu amaray in laxiro dhamaan shanemooyinka iyo goobaha fisqika ee magaalada garowe.
Warqadahan ladadiyay waxaa ganacsatada caadiga ah looga digay in ay si hoose raashin bisil uga iibiyaan saraakiisha Puntland xiliga lagu guda jiro bisha Ramadaan, warqadaha ladaadiyay waxaa ku xardhanaa Bambo gacmeed iyo qori AK47 ah oo uu dul saaranyahay Kitaabka qur’aanka Kariimka.
Arinatani ayaa waxa soo dhaweeyay dhamaan dadka qeerka jacel oo kudhaqan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal, waxeyna imaaneysaa xili ay xaragada mujaahidiinta al shaabaab ay horay uga manuu ceen falalka ceynkaas oo kale dhamaan gobalada konfur ee somaaliya.
xarakada mujaahidiinta al shaab oo ku ee deeyay qaramda mugtiga
Previous articleRa`iisal wasaaraha somaali ameyrikaanka gaas oo booqday dhaawacyada ciidamada shisheeye ee amisom
Next articlexarakada mujaahidiinta al shaab oo sheegay in qaramda mugdiga ay somaaliya kawadaan barkicin